Boka Mbiri - Shanghai Jixiang Viwanda Co, Ltd.
China-Jixiang Boka rine Jixiang Boka sekambani yemubereki, Shanghai Jixiang Aluminium Plastics Co, Ltd., Shanghai Jixiang Viwanda co., Ltd. makambani ari muShanghai songjiang uye zhejiang changxing nyika-chikamu maindasitiri paki. Iyo yakazara nzvimbo inopfuura 120,000 mativi emamirimita, nzvimbo yekuvaka inopfuura 100,000 mativi emamirimita, inzvimbo yemuchinjikwa-indasitiri emakambani emakambani, iyo yakazara yakanyoreswa capital ndeye 200 mamirioni RMB .
Kambani mutevedzeri wemutungamiri webhodhi revatungamiriri veesimbi rinoumbwa nezvinhu & zvigadzirwa zvedhaini rezvinhu zvekuvaka zvemubatanidzwa. Is aluminium composite pani, aruminiyamu jira, aruminiyamu corrugated inoumbwa pane aruminiyamu zvigadzirwa.Company ine Iso90012008 yemhando manejimendi manejimendi sisitimu setifiketi, IS14001: 2004 kwezvakatipoteredza manejimendi system system chitambi, China yekuvakira zvinhu bvunzo centre CTC chigadzirwa mhando system chitupa. Chitupa cheEC nedzimwe nyika "zvitupa zvine simba zvepasi rose. China - Jixiang Boka rave rimwe remabhizimusi anotungamira muindasitiri yekumba, zvitoro zvinotengesa zvinosvika munyika yakakura uye yepakati-maguta. AlusunBond iri nyanzvi mukutengesa kunze kwenyika, yakatengeswa ku Russia, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, Europe, nyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu.Sezvo piyona weyepasi rose maitiro ekushongedza zvinhu, vanhu veJixiang havagutsikane nezvavakaita izvozvi, vanozove vakasununguka, vagamuchire vanhu vekunzwisisa kumba nekune dzimwe nyika kuti vashande pamwe. kuvaka yepasi rose nyowani bhizinesi boka mufananidzo.
Company iri nyanzvi yepamusorosoro zvigadzirwa, anofukidza kuvakwa, njanji zvifambiso, zvemagetsi midziyo yemagetsi nezvimwe zvekushongedza ndiro minda, ine yayo R & D, kugadzira, kutengesa, kutengeserana uye masevhisi; izvo zvakakosha zvigadzirwa ndezve: aluminium-epurasitiki inoumba mapaneru, aruminiyamu corrugated composite pani, aruminiyamu jira, ruvara unhani alu foil, nezvimwewo; Jixiang ine inotungamira tekinoroji, yakanakisa yekugadzira maitiro uye nyanzvi yekutsvagisa. Iye zvino ine gumi nematanhatu neakakura kushandisa otomatiki kudzora kwekugadzira line.Sezvipfuwo indasitiri mutungamiri, yekubatanidza nemusika wepasi rose, kuvandudza giredhi nyowani nyowani yealuminium-epurasitiki inoumba pani otomatiki yekugadzira line.This projekiti iri mune yepasi rose inotungamira chinzvimbo, zadza epamba blank, akahwina maviri yenyika kuvamba patent.Jixiang Ndiyo yenyika yepamusoro uye nyowani tekinoroji bhizinesi, iyo tekinoroji
muzinda zvebhizimisi; Shanghai inozivikanwa brand zvigadzirwa, Shanghai yepamusoro mhando, uye mukana kune yenyika hushumiri hwesainzi uye tekinoroji budiriro yekuongorora mubairo, iro shumiro yesainzi uye tekinoroji budiriro yekusimudzira mapurojekiti mubairo, zvekutanga zvekuvaka zvigadzirwa indasitiri 'yakajairwa hunyanzvi chirongwa mubairo, nyika yakasvibirira zvigadzirwa zvekuvaka zvinoshanda chitupa, nezvimwe.
China-Jixiang Boka, kubva kudiki kusvika kune hombe, kubva kune isina kusimba kuenda kune yakasimba, kubva pakutanga kusvika kutungamira, yakafamba inoshamisa nzira yekusimudzira.
1.Aluminium inoumbwa Pane National Standard Yakabatanidzwa Units
2.Aluminium Solid Panel National Standard Yakabatanidzwa Units
3.Auminiyamu Wave-musimboti wecomputer Panel National standard Yakabatanidzwa Units
4.National Yepamusoro-tech Mabhizinesi
5.Dhipatimendi reZimba Kuvaka Tekinoroji Zviitiko Zvinosimudzira Mapurojekiti
6.Shanghai mukurumbira muchiso
7.Shanghai pamusoro muchiso
Kuti uve wepamba-kirasi yepamba, inozivikanwa pasi rese, yakasimba Management sainzi, ine yepasirese-sikero, oparesheni manejimendi-episheni nhanho uye simba rerudzi uye nekusimudzira kusimudzira kwemakambani makuru emakambani.
Musika-wakanangana nekuita mushe senzvimbo, inotsigirwa neyemberi tsika, uye mhiri kwemiganhu, muchinjikwa-indasitiri bhizinesi, manejimendi-zano zano, manejimendi sisitimu, kubatanidza zviwanikwa, tarenda kuumba-pamwe neepamusoro degree rekunze kwenyika mureza, imple-ment yakazara brand brand yeChina · Jixiang Boka.
Mumakambani makuru emabhizimusi, pfungwa yekuita mutoro, chengetedza tsika-yezvakakosha zvido, rationality inotonga makwikwi emusika, vaine hunhu hwekuita kwavo pachavo zviwanikwa, tarenda, murume-zera uye pfungwa, gadzira kukosha kwenzanga, kuzadzisa zvakajairika kurota.
Pano, zvido zvevanhu uye zvinobudirira zvicharemekedzwa, kubatana kwakabatana kuchaita uye nzira yekudyidzana, kubudirira China.Jixiang Groupthe musimboti wekubatana kwakasimba.
Kutsigira hunhu uye hunyanzvi hwekuita, kuona kuti nhengo dziri pamwe chete kuti dzizadzise chinangwa chebasa, nzira yekudyidzana pamwe nekubatana ichabvisa simba rechokwadi remukati, mweya uyu chikamu chemweya uyu chikamu cheChina · Jixiang Group musangano wesangano, akaumba iyo pfungwa dzakajairika dzekutumwa uye pfungwa yekuve wega uye kuzivikanwa.
Pasi pechiito chemweya wechikwata, nhengo dzechikwata dzine hunhu hwekudyidzana kwechengetana, kubatsirana, kuratidza vatenzi vechikwata chekuchengeta pfungwa yekuita mutoro, uye kuyedza kuchengetedza kukudzwa pamwe chete kwechikwata, vachiziva kune mukurumbira wechikwata sebasa rake akazvisunga, kuitira kuti mweya wechikwata wekusununguka uye kwakazara kuvandudza kwekambani.
Tarenda ndiyo musimboti webhizimusi zviwanikwa, kuomerera pakunzwisisa, kuremekedza, kuvimba, kubatana, kusimudzira tarenda kukosha sisitimu, kubatanidza kukosha kunhengo dzese dzekugadzira uye kukosha, kunatsiridza basa remumwe neumwe mushandi; Tenda kuti kukosha kwechikwata, bhizinesi nevashandi vanokura pamwe chete.
.Kuedza kugadzira nzvimbo inoshandirana inoenderana uye ine hutano, inoita kuti mushandi wese ashande anofara, hupenyu hune hutano.
Kusatendeseka kwechokwadi kune mumwe nemumwe mushandirwi, uye shingairira kukudziridza anogona chero mushandi uye kubatsira vashandi kukura.
Kukurudzira vashandi mukati kutaurirana uye kushandira pamwe uye kubatsirana.
Kumisikidza rinowirirana boka tsika mamiriro, akaenzana uye akajeka manejimendi mashandiro.
Kukurudzira nekutarisa pamaonero, teerera kuita, teerera kugona uye kutendeka kwezvematongerwo enyika, kutsvaga kugona kwekuumbwa kwebhizinesi bhizinesi mutemo wekusarudza uye kushandisa vanhu.
Kurudzira vashandi kufambira mberi nekusimudzira, zvishoma nezvishoma vanogadza sangano rekudzidza